Iziseko zedatha kufuneka zilungiswe okanye ayisiyo Ifayile yedatha
Ikhaya > iimveliso > DataNumen Access Repair > Isiseko sedatha 'filename.mdb' kufuneka silungiswe okanye ayisiyo fayile yedatha.
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "Neemfuno zeDatha ekufuneka zilungisiwe okanye ayisiyoFayile yeDatha" Impazamo
Xa usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula ifayile yedatha yokuFikelela eyonakeleyo, ubona umyalezo olandelayo wemposiso kuqala:
Wena okanye omnye umsebenzisi unokuyeka ngokungalindelekanga iMicrosoft Office Access ngelixa i-Microsoft Office Access database ivulekile.
Ngaba uyafuna ukufikelela kuMicrosoft Office ukuzama ukulungisa isiseko sedatha?
apho 'igama lefayile.mdb' ligama lefayile ye-MDB yokufikelela eya kuvulwa.
Ungacofa u "Ewe" iqhosha ukuvumela ukufikelela kulungiso lwesiseko sedatha. Ukuba iMicrosoft Office Access iyasilela ukulungisa isiseko sedatha esonakeleyo, iya kubonisa lo myalezo wemposiso ulandelayo:
Ifomathi yedatha engaziwayo 'igama lefayile.mdb'
Kwaye ucofa iqhosha u- "Kulungile" kwaye ubone umyalezo wesithathu wemposiso:
Isiseko sedatha 'filename.mdb' ayinakulungiswa okanye ayisiyiyo ifayile yedatha yokufikelela kwiOfisi kaMicrosoft.
Oko kuthetha ukuba iMicrosoft Office Access izame konke okusemandleni ayo kodwa ayinakho ukulungisa ifayile.
Le mpazamo yeMicrosoft Jet kunye ne-DAO kwaye ikhowudi yempazamo ngu-2239.
Impazamo ithetha ukuba iJet yeJet yokuFikelela inokuqonda iziseko ezisisiseko kunye neenkcazo ezibalulekileyo zedatha ye-MDB ngempumelelo, kodwa ifumane urhwaphilizo kwinkcazo yetafile okanye kwidatha yetafile.
Ukufikelela kukaMicrosoft kuya kuzama ukulungisa urhwaphilizo. Ukuba iinkcazo zetheyibhile ezibalulekileyo kwindawo yogcino lwedatha azinakulungiswa, iya kubonisa ifayile ye "Ifomathi yedatha engaziwayo" kwakhona kwaye ukhuphe umsebenzi ovulekileyo.
Isampulu ifayile ye-MDB eyonakeleyo eya kuthi ibangele impazamo. mfayile_2
Ifayile ilungiswe nge DataNumen Access Repair: mydb_2_ zilungiswe.mdb (Itheyibhile 'Ebuyiselweyo_Table2' kwifayile elungisiweyo ehambelana netafile 'yabasebenzi' kwifayile engekonakali)